Kedu mgbe FTC na-aga ego na Celebrity Endorsements? | Martech Zone
Wednesday, May 31, 2017 Mọnde, Jenụwarị 18, 2021 Douglas Karr
Dọ aka na ntị ndị Federal Trade Commission nwere e zigara, ihe karịrị ozi ịntanetị 90 ziri ezi nye ndị na-ere ahịa na ndị na-emetụta ha, gụnyere ndị na-eme ihe nkiri na ndị egwu dịka Kendall Jenner, Emily Ratajkowski, Hailey Baldwin, Sofia Vergara, Lindsay Lohan, Sophia Bush, Zendaya Coleman, Jennifer Lopez, Luke Bryan, na Sean Combs.
Anyị dere banyere ngosi tupu, mana ọ na-eju m anya na ọnụọgụ ndị na-eleghara ịkekọrịta mmekọrịta ego ma ọ bụ nke azụmaahịa ha na ụlọ ọrụ ha na-ekwu maka ya. Mgbe m nwere a njikọ ihe ya na otu ụlọ ọrụ, ana m arụ ọrụ iji kpughee mmekọrịta ahụ na ọkwa ole na ole:
Ibe akwukwo obula M na-ebipụta, ma ọ bụ tweet ma ọ bụ post zuru ezu, ga-ekwu ụfọdụ na ha bụ ndị ahịa ma ọ bụ ma anyị bụ ndị mmekọ, na -ekekọrịta otu mgbasa ozi, ma ọ bụ na ha bụ ndị nkwado.
Gafee saịtị m, M na-eso aha ụlọ ọrụ m na-arụ ọrụ. Ga-ahụ akara ngosi nke ndị na-akwado m na-agbagharị n'okpuru.
Ọbụna nke m Okwu nke Service na-ekwu na m na-ekwukarị banyere ndị ahịa ma ọ bụ na m nwere mmekọrịta ego na m na-ekpughere ha. Ọ dị mkpa iburu n'obi na TOS n'ozuzu anaghị ekpuchi ntuziaka FTC, agbanyeghị!
Ọ dị m ka a ga-asị na m so na mmadụ ole na ole, agbanyeghị.
Ngosipụta na-adịghị na nzuzo
Okwu abụọ ndị a bụ isi maka ụkpụrụ nduzi FTC. Agbanyeghị, ana m ege ntị na pọdkastị, na-ele vidio dị ndụ, ma na-agụ mmelite mmekọrịta kwa ụbọchị site n'aka ndị isi na ụlọ ọrụ azụmaahịa ebe ha anaghị ekpughe mmekọrịta ha na-akwụ ụgwọ na ndị na-ere ahịa, nzukọ, na ọbụlagodi ndị ahịa ha. Izu kwa izu, ha ga-atụle iji otu ngwa ọrụ ọ na - eju ikuku nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ndị ahịa nke ha. Ewezuga imebi ntuziaka FTC na ngosi, ọ bụ nsogbu nye ndị na-ege ha ntị na obodo.
Ọbụghị naanị nke ahụ na-enye nsogbu, enwere m ụlọ ọrụ backlinking na-akpọtụrụ m oge niile na-achọ ịkwụ m ụgwọ itinye backlinks n'ime ọdịnaya m yana ha achọghị ka a mata ya. M na-ajụ ha ajụjụ n'ụzọ doro anya na nzaghachi m ma ọ bụrụ na ha na-arịọ m ka m mebie ụkpụrụ FTC na nkwupụta. Anaghị m enweta nzaghachi na-esochi.
ndị ozi ịdọ aka ná ntị zitere site na FTC bụ ịdọ aka ná ntị ịdọ aka ná ntị n'akụkụ ụlọ ọrụ dum. Ọ dịghị onye kwesịrị ileghara eziokwu ahụ anya na ha kwupụtara ma kwalite izipu ozi ịntanetị. O di nwute, ịdọ aka na ntị na-apụ n'anya na ọ nwere ike bụrụ oge maka FTC iji mee ụfọdụ ihe atụ sitere na ndị ama ama, ndị na-ere ahịa ahịa ahịa, na ndị ahịa na-enweta ọrụ ahụ.
Akwụkwọ nkwado FTC na-ekwu na ọ bụrụ na 'njikọ ihe' dị n'etiti onye na-akwado ya na azụmaahịa nke ngwaahịa - na okwu ndị ọzọ, njikọ nwere ike imetụta ibu ma ọ bụ ntụkwasị obi nke ndị ahịa na-enye nkwado ahụ - njikọ ahụ kwesịrị ịbụ nke ọma ma pụta ìhè ekpughere, ọ gwụla ma njikọ ahụ adịlarị mbụ site na gburugburu nke nkwukọrịta nwere nkwenye. Akwụkwọ ozi FTC zigara Mark King, Onye isi ala Adidas Group North America.
Ndị a ma ama na Instagram emebi iwu FTC
N'ezie, nyocha a sitere na Mediakix, ụlọ ọrụ na-ewuli mgbasa ozi mmetụta mmetụta ọdịnala, gosipụtara na 93% nke mgbasa ozi mgbasa ozi ama ama na Instagram na-emebi ụkpụrụ FTC
Tags: ndi amarangosiEmily Ratajkowskinkwenyeftcemail ftftc email ịdọ aka na ntịntuziaka ftcịdọ aka ná ntị ftcHailey Baldwinmmetụtaahịa ahịainstagramJennifer LopezKendall JennerLindsay LohanLuke Nwankwonjikọ iheEgwuregwu SeanSofia VergaraSophia ohiaZendaya Coleman